Izinto zokwenza iiglavu zelatex zimpontshelwe kwitanki yezinto ezingafunekiyo ngempompo yedayaphragm yokuxuba nokulungiselela, emva koko zithunyelwa kwiindawo ezahlukeneyo kumgca wokuveliswa kweglavu yetyhubhu yokuntywiliselwa ngexesha lokusebenza komgca wemveliso.
Okokuqala, imodeli yesandla seceramic iya kucocwa ngeasidi, ialkali kunye namanzi; emva koko imodeli iya kufakwa emanzini ashushu okucoca. Emva koko, ukungunda okucocekileyo kufuneka kugxunyekwe kwindawo egudileyo kunye nezinye izinto eziluhlaza; Inkqubo yokuntywila imi ngolu hlobo lulandelayo: ukungunda okucociweyo kuqala kungeniswa emanzini ashushu kuze kufudunyezwe de kugxunyekwe kwindawo egudileyo kwaye yomiswe ukuze kuditshwe. Emva kokuntywila, ithunyelwa kwi-oveni ukuyoma kwangaphambili, ukongeza ifayibha emkhonweni wangaphakathi, ukugungxula amanzi ashushu uze emva koko uthumele kwi-oveni ukuze ivulwe, yome kwaye yenze. Emva kokuba iiglavu zithotyiwe, ziyanyuselwa, zitshekishwe, zimile kubushushu obuphantsi, zomile kubushushu obuphakathi, zihlanjwe ngamanzi, zome amanzi, zomile, emva koko zipakishwe zize zithunyelwe kwindawo yokugcina imveliso egqityiweyo.
Iiglavu zelatex zenziwe nge-latex yendalo njengezona zinto ziphambili ziphilayo. Iiglavu zelatex zicocwa ngeasidi kunye nealkali kuqala kwaye zihlanjwe ngamanzi. Imodeli ecociweyo kuqala igxunyekwe emanzini ashushu kwaye ishushu de iarhente yejeli ifakwe kwaye yomiswe. Emva kokuntywila, thumela e-ontini ukomisa kwangaphambili, ukugungxula amanzi ashushu emva koko uthumele kwi-oveni ukunyanga, ukomisa kunye nokwenza. Emva kokudilizwa, iiglavu ziyaphefumlelwa okanye zinkcenkceshelwe ukuze zihlolwe, zihlanjwe, ziphelelwe ngamanzi emzimbeni kwaye zomile, emva koko zipakishwe zithunyelwe kwindawo yokugcina imveliso egqityiweyo.
Ukusukela ngeminyaka yoo-1980, kusasazeke iintsholongwane ezininzi, inani labasebenzi bezonyango abanxibe iigloves lenyuke kabukhali, kwaye ulwazi lwabantu lokhuselo lokusingqongileyo kunye nokuzikhusela lonyukile. Ngoku imfuno zonyaka zegloves yelatex zimalunga neebhiliyoni ezingama-30, kwaye eli nani liza kuqhubeka nokukhula.